မျက်မှောက်ရေးရာ | Danya Wadi
ရခိုင်အရေးကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံသို့ အိတ်ဖွင့် ပေးစာ
By danyawadi February 4, 2017 Leaveacomment
DHRP’s recommendations to government in solving problem in Rakhine state. Credit: From Facebook – U Kyaw Min Ex-crpp
အင်္ဂလိပ်ခေတ် ရန်ကုန်မြို့ တည်ဆောက်ပုံ သမိုင်းနှင့် ရှေးဟောင်းစေတီ ပုထိုးများ ပျောက်ကွယ် သွားရခြင်း အကြောင်း
By danyawadi October 24, 2013 Leaveacomment
အာဘော်/ဆောင်းပါး — 01 August 2013 ယခု လက်ရှိမြင်ရသောပုံမှာ B.R. PEARN ရေးသားသည့် History of Rangoon စာအုပ်တွင် ပါရှိသော ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲ ထားခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်ရှိ ရေပတ်လည် ဝိုင်းနေသည့် ဆူးလေစေတီတော်နှင့် အနီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၏ ပုံပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ရန်ကုန်ဟု ဖြစ်လာလတ္တံ့သော အရပ်ဒေသသည် ခိုင်မာသော သမိုင်းကြောင်းများ အရ အေဒီ ၆ ရာစုခန့်တွင် မွန်လူမျိုးများမှ တည်ထောင်ခဲ့ကြပြီး မူလ အမည်မှာ ဒဂုံ မြို့ဖြစ်သည်။ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ သည် ၁၇၅၅ခုနှစ်တွင် မွန်လူမျိုးများအား အောင်မြင် ပြီးနောက် ရန်အပေါင်း ကုန်စင်သည့် အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် […]
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့စစ်တကောင်းဒေသမှဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င် များ ရခိုင် ဘက် သို့ ဆက် လက် ပြောင်း ရွှေ့
By danyawadi June 14, 2013 Leaveacomment
မောင်အေး ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများသည် အမြဲတန်း အခြေချနေထိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဆက်လက်ပြောင်းရွေ့နေကြသည်ဟု သိရသည်။ လွန်ခဲသည့်အင်္ဂါနေ့ကလည်း လူပေါင်း ၃၀ ခန့် ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောဘက်သို့ ပြောင်းရွေ့သွားကြောင်း ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ တက်ကနက်မြို့နယ် မြစ်နားရွာရွာသား မျက်မြင် တစ်ဦးက ပြောသည်။ “ ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ မနက် ၉ နာရီကျော်မှာ တစ်ဖွဲ့ မောင်တောဘက်ကို နတ်မြစ်ကို လှေနဲ့ ဖြတ်ကျော် ကူးသွားတယ်။ အဲဒီနေ့ဘဲ ညနေ ၃ နာရီကျော်မှာတဖွဲ့ ဆက်ကူးသွားကြတယ်။ သူတို့အားလုံး ကျွန်တော်တို့ရွာက လှေနဲ့ ကူးသွားကြတယ်” ဟု ဆိုသည်။ သူတို့မှာ စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသ ဘင်ဒရာဘင်ခရိုင် တန်းဆိပ်မြို့နယ်အတွင်းမှ ကျေးရွာသား များ ဖြစ်ပြီး […]